နှောင်ဖွဲ့ မှုများ ၊ မဆီးတားဘဲ
အားကောင်းမောင်းသန်၊ လေကိုဆန်လို့ 
တင်းကျပ်မှုများ ၊ ရံမထားဘဲ
နိုးကြားထက်သန် ၊ေ၇ကိုဆန်လို့ 
အိမ်မက်တွေကို ဖန်တီး ပြချင်တယ်။
ရွံကြောက်မဲ့ ကင်း ၊ ရဲရင့် အမြဲ။
Posted by World of Wingate Sai at 2:03 PM No comments:
သိမှတ်ဖွယ် စကားလုံး ၁၀ လုံး
1..တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ ပထမဆုံး စကားလုံးက " ငါ " ဆိုတာပါ။ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
2..ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ ၂ ခုမြောက် စကားလုံးက "ငါတို့" ဆိုတာပါ။ အသုံးပြုပါ။
3..အဆိပ်အပြင်းဆုံး ၃ ခုမြောက် စကားလုံးက "မာနတရား"ပါ။ သတ်ပစ်ပါ။
4..လူတွေ အသုံးအများဆုံး ၄ ခုမြောက်စကားလုံးက "အချစ်"ပါ။ တန်ဖိုးထားပါ။
5..ကျေနပ်စရာ အကောင်းဆုံး ၅ ခုမြောက် စကားလုံးက "အပြုံး"ပါ။ထိန်းသိမ်းပါ။
6..အမြန်ဆုံး ပျံ့နှံ့ကူးစက်နိုင်တဲ့ ၆ ခုမြောက် စကားလုံးက "ကောလဟာလ"ပါ။ လျစ်လျူရှုပါ။
7..အခက်ခဲဆုံး ၇ ခုမြောက် စကားလုံးက "အောင်မြင်မှု"ပါ။ ဆွတ်ခူးပါ။
8..အန္တရာယ် အရှိဆုံး ၈ ခုမြောက်စကားလုံးက "မနာလိုခြင်း"ပါ။ ဝေးဝေးနေပါ။
9..အစွမ်းထက်ဆုံး ၉ ခုမြောက် စကားလုံးက "အသိဥာဏ်ဗဟုသုတ"ပါ။ ရယူပါ။
10..မရှိမဖြစ် အရေးကြီးဆုံး ၁၀ ခုမြောက် စကားလုံးက "ယုံကြည်မှု"ပါ။ မြတ်နိုးပါ။
Posted by World of Wingate Sai at 1:50 PM No comments:
#ပြော ပြု တွေးလျှင် သတိယှဉ်
Posted by World of Wingate Sai at 1:39 PM No comments:
မိန်းကလေးအပေါ်တုံ့ ပြန် တန်းဖိုးထားတတ်တဲ့ "တုံးအတဲ့ယောက်ျားနဲ့ ထက်မြက်တဲ့ယောက်ျား"
(၁) တုံးအတဲ့ယောက်ျားက မိန်းမကိုဘယ်တော့မှ မချီးကျူးဘူး။ ကောင်းတာတွေလုပ်ရင် ဆိတ်ဆိတ်နေတယ် မကောင်းတာတွေလုပ်ရင် ကဲ့ရဲ့တယ်။
ထက်မြက်တဲ့ယောက်ျားက မိန်းမရဲ့အားသာချက်လေးတွေကို ရှာကြံချီးကျူးပြီ: ရှေ့ဆက်လုပ်ချင်အောင်
(၂) တုံးအတဲ့ယောက်ျားက ကိုယ့်မိန်းမကလွဲရင် မိန်းမအားလုံး လှတယ်ထင်တယ်။
ထက်မြက်တဲ့ယောက်ျားက ကိုယ့်မိန်းမကို ဘယ်လိုလှအောင်လုပ်ပေးရမလဲ စဉ်းစားတယ်။
(၃) တုံးအတဲ့ယောက်ျားက ကိုယ့်မိန်းမကို အလုပ်တွေ အများကြီးပြီးမြောက်စေချင်တယ်။ (နူးညံ့ပြီး ယောကျာင်္်းကို နာခံပြုစုတတ်စေချင်တယ်။ တချိန်ထဲမှာပဲ လှပပြီး ထက်မြက် ဝင်ငွေကောင်းစေချင်တယ်။ ဒါတွေ တပြိုင်နက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သူမေ့ထားတယ်)
ထက်မြက်တဲ့ယောက်ျားက Nobody is Perfect ဆိုတာကို ယုံကြည်လက်ခံတယ်။ ကိုယ်ရတဲ့မိန်းမဟာ
(၄) တုံးအတဲ့ယောက်ျားက အတိတ်ဟောင်းကို ခဏခဏထုတ်ပြီး မနာလိုဖြစ်တယ်။
ထက်မြက်တဲ့ယောက်ျားက လှပတဲ့အနာဂတ်ရောက်ဖို့ ဦးတည်တယ်။
(၅) တုံးအတဲ့ယောက်ျားက မိန်းမကို တဗျစ်တောက်တောက်ပြောတယ်လို့ အပြစ်တင်စိတ်ပျက်တယ်။
ထက်မြက်တဲ့ယောက်ျားက အနမ်းပြင်းပြင်းတစ်ချက်နဲ့ နှုတ်ဆိတ်စေဖို့ သတိရတယ်။
(၆) တုံးအတဲ့ယောက်ျားက "နင်မရှိလဲ လှေကား၃ထစ်ဆင်း လူပျိုပဲ" လို့ အော်ဟစ်တယ်။
ထက်မြက်တဲ့ယောက်ျားက "နင်ဟာ ငါ့ဘဝရဲ့မရှိမဖြစ်သူပါ"လို့ဆိုတယ်။
(၇) တုံးအတဲ့ယောက်ျားက မိန်းမကို တာဝန်အရ အရာရာ ပေးဆပ်စေတယ်။
ထက်မြက်တဲ့ယောက်ျားက မိန်းမကို စိတ်လိုလက်ရ ပြုစုအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်။
(၈) တုံးအတဲ့ယောက်ျားက ကိုယ်တော်၊ ကိုယ်တတ်ကြောင်းကို ပိုအရေးစိုက်တယ်။ ကိုယ့်မာန ကိုယ့်အတ္တထိခိုက်မခံဘူး။
ထက်မြက်တဲ့ယောက်ျားက နှစ်ဦးအတူကြိုးစားမှ ခရီးရောက်တယ်ဆိုတာ လက်ခံတယ်။
(၉) တုံးအတဲ့ယောက်ျားက မိန်းမကို စိတ်အားငယ်မှုနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မယုံကြည်မှုတွေပေးတယ်။
ထက်မြက်တဲ့ယောက်ျားက မိန်းမကို စိတ်လုံခြုံမှုနဲ့ အေးချမ်းမှုကို ပေးတယ်။
(၁ဝ) တုံးအတဲ့ယောက်ျားက သူ့ဒေါသကြားမှာ မိန်းမကို ဦးတည်ရာပျောက်စေတယ်။
ထက်မြက်တဲ့ယောက်ျားက သူ့တည်ကြည်မှုနဲ့ အိမ်ထောင်ကိုသာယာစေတယ်။
Posted by World of Wingate Sai at 9:00 AM No comments:
အဆိပ် ဆိုတာ ဘာလဲ???
*လွန်ကဲတာ မှန်သမျှ အဆိပ်ပါပဲ
………အထိုင် လွန်ကဲ တယ်
ဒါလည်း အဆိပ် ပါပဲ
Posted by World of Wingate Sai at 4:16 AM No comments:
(၂)ပစ်ကွင်းကိုချိန်ပစ်(Begin with the End in Mind)
(၃)အရေးကြီးတာအရင်လုပ်[Put First Thing First]
(၅)နားလည်မှုရှိ[Seek First to Understand,Then to be understood]
(၇)ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်"သ"[Sharpen the Saw]
Posted by World of Wingate Sai at 12:27 PM No comments:
လူသားတို့မကျင့်အပ်သောအရာ( ၅ ) ပါး
၁. ခြင်္သေ့လိုလဲ မဟောက်နဲ့
၂. ဖားငယ်လိုလဲ မကြောက်နဲ့
၃. တောင်လိုလဲ မမောက်နဲ့
၄. မြစ်လိုလဲ မကောက်နဲ့
၅. တွင်းလိုလဲ မစောင်းနဲ့
Posted by World of Wingate Sai at 8:41 AM No comments:
သင့် အပြုအမူအတိုင်းေ၇ာင်ပြန်ဟပ်လိမ့် မည်
သင့် အပြုအမူအတိုင်းေ၇ာင်ပြန်ဟပ်လိမ့် မည်။
လူတော်လူမော်တွေ အမြဲတစေ လက်ကိုင်ထားတတ်တဲ့ အမူအကျင့်(၁၀)မျိုး
Posted by World of Wingate Sai at 5:55 AM No comments:
"စုပေါင်းစွမ်းအင်" ဆိုတာ..သူအလိုလို၇လာတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ တမင်ဖန်တီးယူ၇တဲ့ ဖြစ်စဉ်ပါ။
ဒီလို ဖန်းတီးနိုင်ဖို့ ပထမဆုံးနှလုံးသွင်း၇မှာကတော့ ..
** "လူတိုင်းလူတိုင်း သူ့ အဆင်း၊သူ့ အလင်းနဲ့ ၇ှိပါလား.."** ဆိုတာကိုပါပဲ။
မတူခြားနားမှု ( Diversity) ကိုအသိအမှတ်ပြုနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
"စုပေါင်းစွမ်းအင်" ရဖို့ ကြိုးစား၇တဲ့ လမ်းမှာတောင်ကြီးသုံးလုံးကာဆီးနေတာကိုအထူးသတိပြုဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီတောင်တွေကိုမကျော်ဖြတ်နိုင်၇င် စုပေါင်းစွမ်းအင် ကိုဘယ်လိုမှဆုပ်ကိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
(၁) ပထမတောင်ကြီးကတော့ "မာန" ဆိုတဲ့ တောင်ကြီးပါ.
မတူခြားနားမှုကိုအထင်အမြင်သေး၇ာက ကိုယ်ကိုကိုယ်သူများထက်ခေါင်းတစ်လုံးမြင့် သူလို့ 
အထင်ေ၇ာက်လာတဲ့"ဘ၀င်" စိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဘ၀င်ခံနေတော့ သူများ၇ဲ့ ခံစားမှုကိုမစာနာတတ်
သလို သူများ၇ဲ့အတွေးအမြင်တွေကိုလည်းစိတ်မ၀င်စားတတ်တော့ ဘူး။
" အမှန်တ၇ားအားလုံးငါ့မှာ၇ှိနေပြီ"ဆိုပြီး..ကိုယ်အသိစိတ်ကို..ကိုယ်ဘာသာတံခါးပိတ်နေတော့ တယ်"
(၂) ဒုတိယတောင်ကြီးကတော့"ဂိုဏ်းဂဏစိတ်"စိတ်ဆိုတဲ့တောင်ကြီးပါ
ကိုယ်နဲ့ အမြင်တူ၊ အတွေးတူ ၊ ယုံကြည်ချက်တူသူငယ်ချင်းသာ အဖတ်လုပ်ပြီး လောကကြီး နဲ့ အဆက်ပြတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာ ကိုယ့်အစုအဝေးကိုသာ ကမ္ဘာကြီးထင်နေတတ်ပေမဲ့
တကယ့်တော့ စိတ်ကူယဉ်ဂိုဏ်းလေးတစ်ခုထက်မပိုပါဘူး။ အုပ်စုစွဲ ၊ဂိုဏ်းဂဏစွဲကခံနေတော့ သူများအမြင်
"ငါနဲ့ မတူ ငါ၇န်သူ" ဆိုတဲ့အစွဲနဲ့ ပုတ်ခတ်စော်ကားတဲ့တုံ့ ပြန်နည်းကလွဲလို့သူတို့ ဘာမှမလုပ်တတ်ကြဘူး။
(၃) နောက်ဆုံတောင်ကြီးကတော့"အာဃာတ" ဆိုတဲ့ တောင်ကြီးပါပဲ
ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာ..အတိတ်၇ဲ့ အကျဉ်းသားတွေဖြစ်တတ်သလို၊ အမုန်းနဲ့ လောင်မြိုက်ခံနေ၇၇ှာ
Posted by World of Wingate Sai at 1:43 PM No comments:
Labels: ကမ္ဘာကျော်များ၏အဆိုအမိန့် များ
လူတွေမှာ ၂၀% က လည်ပင်းအထက်ပိုင်းနဲ့ပိုက်ဆံရှာတယ်၊ ၈၀% က လည်ပင်းအောက်ပိုင်းနဲ့ ပိုက်ဆံရှာတယ်။ ၂၀% က အချိန်ဝယ်တယ်၊ ၈၀% က
အချိန်ရောင်းတယ်။ ၂၀% က လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းကြီးတွေ လုပ်တယ်၊ ၈၀% က အလုပ်လုပ်တယ်။ ၂၀% က အနာဂတ်အတွက် အစီအစဉ်ချတယ်၊ ၈၀% က
အိပ်ယာထမှ ဒီနေ့ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာ စဉ်းစားတယ်။ ၂၀% က ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြောင်းလဲတယ်၊ ၈၀% က ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပြောင်းလဲပစ်တယ်။ ၂၀% က
ဥစ္စာကြွယ်ဝတယ်၊ ၈၀% က ဆင်းရဲတယ်။ မင်း ၂၀% လုပ်မလား၊ ၈၀% လုပ်မလား။
ဘုရားသခင်က လူတိုင်းလူတိုင်းကို တစ်ရက်မှာ ၈ နာရီစာ အပိုင်းအခြားသုံးခုစီ မျှမျှတတပေးထားတယ်။ ပထမ ၈ နာရီမှာ လူတွေအလုပ်လုပ်ကြတယ်၊ ဒုတိယ ၈
နာရီမှာ လူတွေအိပ်ကြတယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရဲ့ ကွဲပြားခြားနားချက်တွေကို များသောအားဖြင့် တတိယ ၈ နာရီကနေ ဖန်တီးခဲ့ကြတာပဲ။
လူတိုင်းမှာ လျှောက်စရာလမ်းနှစ်လမ်းရှိတယ်၊ တစ်လမ်းကလျှောက်ကိုလျှောက်ရမယ့်လမ်း၊ နောက်တစ်လမ်းက ကိုယ်လျှောက်ချင်တဲ့လမ်း။ မလျှောက်မနေ
လျှောက်ကိုလျှောက်ရမယ့်လမ်းကို လှလှပပလျှောက်ပြီးမှ ကိုယ်လျှောက်ချင်တဲ့လမ်းကို လျှောက်လို့ရပါလိမ့်မယ်။
အအေးတစ်ပုလင်းကို လမ်းဘေးဆိုင်မှာ ၁၀ နဲ့ရောင်းတယ်၊ ဟိုတယ်မှာ ၃၀ နဲ့ရောင်းတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဘိုးဟာလည်း
နောက်ဆုံးတော့လည်း မင်းဘာကိုယုံရင်ဘာဖြစ်တာပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး ဝေါဟာရ နှစ်ခုရှိတယ်၊ တစ်ခုက
ခေါင်းမာတာ၊ နောက်တစ်ခုက ကြိုးစားတာ။ ကြိုးစားတဲ့ကောင်က သူ့ကိုသူပြောင်းလဲပစ်တယ်၊ ခေါင်းမာတဲ့ကောင်က သူ့ကံကိုသူပြောင်းလဲပစ်တယ်။
ဘယ်သူ့ကိုမှမယှဉ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့အခါ အားမငယ်ပါနဲ့၊ မင်းဟာသာမန်လူတစ်ယောက်ဆိုတာလည်း သတိရပါ။ သူများတကာရယ်မောနေတာတွေ့ရင်လည်း
တကမ္ဘာလုံးမှာ မင်းတစ်ယောက်တည်း ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေတယ်မထင်ပါနဲ့၊ တကယ်တော့ သူများတွေက မင်းထက်ပိုပြီး ဟန်လုပ်တတ်လို့ပဲ။ အကူအညီမဲ့နေတဲ့အခါ
မင်းငိုချင်ငိုလိုက်ပါ၊ သို့သော် ငိုပြီးရင်တော့ ပြန်ပြီးနိုးကြားတက်ကြွလာရမယ်၊ အရာရာကိုလက်လွှတ်ဆုံးရှုံးပစေဦးတော့၊ မင်းရဲ့အပြုံးလေးကိုတော့
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပူပင်သောကတွေကနေ သူ့ရဲ့စိတ်နေသဘောထား အတိုင်းအဆနဲ့ အနာဂတ်အောင်မြင်မှုရဲ့ အတိမ်အနက်ကို မှန်းဆလို့ရတယ်။ တနည်းအားဖြင့်၊
ပြဿနာအသေးလေးတွေဟာ အချိန်ကုန်ခံပြီး ပူပန်နေစရာမလိုဘူး၊ တကယ့်ကြီးမားတဲ့ ကိစ္စတွေကျပြန်တော့ ပူနေရုံနဲ့လည်း အကျိုးမရှိဘူး။ အချိန်တိုတိုနဲ့
ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိရင် အရာရာတိုင်းဟာ မိုးတွေထန်ပြီးတဲ့နောက် ပွင့်လင်းသွားတဲ့ ရာသီဥတုလို သာယာနေမှာပါပဲ။
မင်းမအောင်မြင်လို့ရတယ်၊ သို့သော်မတိုးတက်လို့မရဘူး။ မင်းရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကဖျက်ကယက်လုပ်မယ့်သူတွေ ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့
အပြင်ကသက်ရောက်တဲ့အားကြောင့် ကွဲသွားတဲ့ကြက်ဥဟာ အစာတစ်လုပ်ဖြစ်သွားပေမယ့် အတွင်းကနေရုန်းထွက်လာတဲ့အားကြောင့် ကွဲသွားတဲ့ကြက်ဥကျတော့
အသက်တစ်ချောင်း ဖြစ်လာစေတယ်။ လူ့ဘဝဆိုတာလည်းအဲလိုပါပဲ၊ အပြင်ကလာတဲ့အားတွေက ဖိအားတွေဖြစ်ပြီး အတွင်းကနေ ဖြစ်တည်လာတဲ့အားတွေက
ကြီးပြင်းရှင်သန်မှုပါ။ ပြင်ပကအားတွေနဲ့ အခွဲခံဖို့ပဲ ထိုင်စောင့်နေလို့ရှိရင် သင်ဟာ သူများရဲ့အစာတနပ် ဖြစ်သွားမှာမလွဲပါဘူး။ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး
အတွင်းကနေ ဖောက်ထွက်နိုင်ရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ရှင်သန်ကြီးပြင်းခြင်းဟာ အသက်တစ်ချောင်း အသစ်တဖန် ပြန်လည်မွေးဖွားလာတာနဲ့ တူတယ်ဆိုတာ
Posted by World of Wingate Sai at 5:45 AM No comments:
နောင်အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်. ထာ၀၇ငြိမ်းချမ်းေ၇းအမွေကို ပေးဆပ်ချင်တဲ့အနာဂတ် ထာ၀၇အလင်း၇ှင်.
သူက . . ဖခင်ကောင်း . . စနစ်ဟောင်းကိုတော်လှန်နေသူ
သူက သာမန်နဲ့မတူတဲ့ စိတ်ထားတော့ရှိတယ်
သူ့မိသားစုမှာ သူက ဖခင်ကောင်း
သူ့တိုင်းပြည်မှာ သူက ခေါင်းဆောင်ကောင်း
စနစ်ကို ချက်ချင်း ပြောင်းဖို့မလွယ်ဘူး
အရာရာကို အသိနဲ့သတိကို စုံတွဲလို့
သူ့မှာ တိုင်းပြည်အတွက်လက်တွဲမယ့် ဒေါ်စုရှိတယ်
သူ့မှာ တိုင်းပြည်အတွက်လက်တွဲမယ့် ပြည်သူတွေရှိတယ်
သူ့ရင်ခုန်သံဟာ တိုင်းပြည်အတွက် သွေးတစ်စက်
သူ . . မောနေပါပြီ
သူ့ မျက်ဝန်းတွေက မသမာမှုတွေလုပ်နေလို့လား
သူ့မှာ သူမတတ်နိုင်တဲ့ တွန်းအားတချို့
သူ့မှာ သူကယ်ဆယ်နေရတဲ့ ဒုက္ခတချို့
သူ့မှာ သူ ထမ်းတင်နေရတဲ့ အနာဂါတ်တချို့
နံနက်ခင်းတိုင်းမှာ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့လို
သူ . . လင်းစေချင်တယ်
အမှောင်တွေကို . . . ဖယ်ခွာချလို့
သူ့ နေ့ရက်တိုင်းအတွက် ထိပ်မှာ ရှိတယ်
သူ့ ခြေထောက်တစ်စုံဟာ တိုင်းပြည်အတွက်
တစ်နှစ်. . .နှစ်နှစ်. . .သုံးနှစ် . . .
ဖိအားက လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို နှောင့်နှေးစေတယ်
စနစ်ဟောင်းကို ဦးဆောင်တော်လှန်နေတဲ့သူ ။
Posted by World of Wingate Sai at 11:31 AM No comments:
Life isagift , I accept it.
Life is an adventure ,I dare it.
Life isagame , I play it.
Life isamystery ,I `m unfolding it .
Life isapuzzle, I`m solving it.
Life can beastruggle, I `m facing it.
Life is beauty,I praise it.
Life is an opportunity ,I took it .
Life is my mission, I `m fulfilling it.
Chanakya ရဲ့ ထူးကဲကောင်းမွန်သည့် အတွေးအခေါ် (၁၅) ခု
Chankya ဆိုတာ ဘီစီ 370 မှာမွေးဖွားပြီး 283 မှာ သေဆုံးခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်၊ ကျောင်းဆရာနဲ့ တော်ဝင်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်....
သူဟာ တက္ကသီလာ တက္ကသိုလ် (Takshashila University) မှာ စီးပွားရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာရပ်များဆိုင်ရာ ပါမောက္ခလည်းဖြစ်ပါတယ်...
အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ Chankya သင်ကြားပို့ချခဲ့တဲ့ အတွေးအခေါ်အယူအဆတွေထဲက မှတ်သားဖွယ်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်...
၁) တခြားသူရဲ့အမှားတွေကနေ လေ့လာသင်ယူပါ... သင့်အနေနဲ့ အဲ့ဒီအမှားတွေအကုန်လုံးကို ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်လောက်တဲ့အချိန်အထိ အသက်ရှည်မှာမဟုတ်ဘူး....
၂) လူတစ်ယောက်ဟာ အလွန်မရိုးသားသင့်ဘူး... ဖြောင့်မတ်တဲ့သစ်ပင်တွေဟာ ဦးဆုံးအခုတ်ခံရတယ်... ဒီလိုပဲ အရိုးသားဆုံးလူတွေကိုလည်း အရင်ဆုံးရှင်းထုတ်ကြလိမ့်မယ်...
၃) အဆိပ်မရှိတဲ့ မြွေတစ်ကောင်တောင်မှ အဆိပ်ပြင်းသလို ဟန်ဆောင်နေသင့်တယ်...
၄) ဘယ်လိုမိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးမျိုးမှာမဆို နောက်ကွယ်မှာတော့ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ငဲ့တတ်တာချည်းပါပဲ... ကိုယ့်အတွက်မငဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းဆက်ဆံမှုမျိုးဆိုတာ လုံးဝမရှိပါဘူး... ဒါဟာခါးသီးတဲ့အမှန်တရားပါပဲ...
၅) အလုပ်တစ်ခုကိုမစခင်မှာ သင့်ကိုယ်သင်မေးခွန်း သုံးခုအမြဲမေးပါ... ဘာကြောင့် ဒီအလုပ်ကိုငါလုပ်ရမှာလဲ.... အကျိုးရလဒ်ကဘာလဲ... အောင်မြင်နိုင်သလား.... သေသေချာချာစဉ်းစားကြည့်ပြီး ဒီမေးခွန်းသုံးခုအတွက် ကျေနပ်လောက်တဲ့အဖြေရတဲ့ အခါမျိုးမှသာ ဆက်လုပ်ပါ...
၆) အကြောက်တရားက အနားချဉ်းကပ်လာတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် အဲဒီအကြောက်တရားကို ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ပြီး ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါ....
၇) ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးမားဆုံးစွမ်းအားကတော့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ နုနယ်ပျိုမြစ်လှပမှုပါပဲ...
၈) တစ်ခုခုကိုစလုပ်မိပြီဆိုတာနဲ့ ရှုံးနိမ့်မှာကိုမကြောက်နဲ့... ဘယ်တော့မှလည်း လက်မလျှော့နဲ့... ယုံကြည်ရိုးသားရဲဝံ့စွာလုပ်တဲ့သူတွေကသာ အပျော်ရွှင်ဆုံးလူတွေဖြစ်တယ်...
၉) ပန်းတွေရဲ့မွှေးရနံ့ဆိုတာ လေသင့်ရာအတိုင်းသာ သင်းပျံ့ကြရတာဖြစ်တယ်... လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကောင်းသတင်းကတော့ အရပ်မျက်နှာတခွင်လုံးကို ပျံ့နှံ့စေတယ်....
၁၀) ဘုရားသခင်ဆိုတာ ရုပ်ပုံလွှာတစ်ခုအနေနဲ့ တည်ရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး... သင့်ခံစားချက်က သင့်ရဲ့ဘုရားသခင်ပဲ... သင့်စိတ်ဝိဥာဏ်က သင့်ဘုရားကျောင်းပဲ....
၁၁) လူတစ်ယောက်ဟာ ဖွားမြင်ခြင်းနဲ့အတူ ကြီးမြတ်လာတာမဟုတ်ဘူး... လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့အတူ ကြီးမြတ်လာတာ...
၁၂) သင့်ထက်သာတဲ့အခြေအနေကလူတွေ ဒါမှမဟုတ် သင့်ထက်နိမ့်ကျတဲ့ အခြေအနေကလူတွေကို ဘယ်တော့မှ မိတ်ဆွေမဖွဲ့ပါနဲ့... ဒီလိုမိတ်ဆွေမျိုးတွေနဲ့ဆက်ဆံရတာဟာ သင့်ကိုဘယ်တော့မှ ပျော်ရွှင်စေမှာမဟုတ်ဘူး...
၁၃) သင့်ကလေးကို ပထမငါးနှစ်အတွင်း သိမ်မွေ့ကြင်နာစွာပြုမူဆက်ဆံပါ... ဒုတိယငါးနှစ်အတွင်း ပြောဆိုရိုက်နှက်ဆုံးမပါ... အသက် ၁၆ နှစ်ရောက်တဲ့အခါ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လို ဆက်ဆံပါ... အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့ သင့်ကလေးတွေဟာ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတွေပါပဲ...
၁၄) မျက်မမြင်တစ်ယောက်အတွက် ကြေးမုံတစ်ချပ်က အသုံးမဝင်သလို နုံချာမိုက်မဲသူတစ်ဦးအတွက် စာအုပ်စာပေတွေကလည်း အသုံးမဝင်ပါဘူး...
၁၅) ပညာရေးဟာ အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေပါ... ပညာတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ နေရာတိုင်းမှာ ရိုသေလေးစားမှုကိုခံယူထိုက်ပါတယ်... ပညာဟာ အလှတရားနဲ့ ငယ်ရွယ်ပျိုမြစ်မှုကို အနိုင်ယူနိုင်ပါတယ်...
Posted by World of Wingate Sai at 12:21 PM No comments:
ဘယ်ဥစ္စာမှ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ဘာကိုမှ အကြာကြီးမပိုင်ဘူး
Posted by World of Wingate Sai at 9:58 AM No comments:
... ကိလေသာရွာထိပ်က မည်းမည်းမြင်ရာထိုးဟောင်တက်တဲ့
Posted by World of Wingate Sai at 9:53 AM No comments:
Love The World With Your Kindness.
Posted by World of Wingate Sai at 10:47 AM No comments:
အလုပ်ထဲေ၇ာက်တော့ ငွေ၇ှိတယ်၊ခွန်အား၇ှိတယ်၊ဒါပေမဲ့ အချိန်မ၇ှိဘူး။
အသက်အ၇ွယ်ကြီး၇င့် သွားတော့ငွေ၇ှိတယ်၊အချိန်၇ှိတယ်၊ဒါပေမဲ့ ခွန်အားမ၇ှိတော့ ဘူး။
(လူ၇ဲ့ ဘ၀အခြေအနေတစ်ခုတိုင်းမှာတစ်ခုခုကတော့ မပြည့် မစုံဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို..အသက်အ၇ွယ်ကြီးလာသည်နဲ့ အမျှပိုပိုသိလာတော့ တယ်။)
Posted by World of Wingate Sai at 11:45 AM No comments:
ခြင်္သေ့ ရဲ့ အမြန်နူန်းက တစ်နာရီ ၅၈ ကီလိုမီတာ ရှိတယ် ။
သမင်ရဲ့ အမြန်နူန်းက တစ်နာရီ ၉၀ ကီလိုမီတာ ရှိတယ် ။
ဒါပေမယ့် လည်း သမင်က ခြင်္သေ့ရဲ့ သားကောင်ဖြစ်သွားရတယ် ။
(( အကြောက်လွန်ပြီး သမင်ပြန်လှည့်ကြည့် ရင် အရည်အချင်း သာလည်း အစားခံရမယ် ))
Posted by World of Wingate Sai at 11:20 AM No comments:
အသက် ၆၀ အသက်၇ှင်နေထိုင်၇တဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်၇င်
-အိပ်ချိန်က တစ်၇က်ကို ၈နာ၇ီ ၇ှိခဲ့ မယ်ဆို၇င် နှစ်၂၀ အိပ်စက်၇င်းကုန်ဆုံးသွား၇တယ်။
-ကျောင်းချိန်အလုပ်ချိန်တွေနဲ့ တစ်၇က်ကို ၈ နာ၇ီအချိန်ပေးခဲ့ ၇မယ်ဆို၇င် နောက်ထပ်အနှစ် ၂၀ ကုန်သွား၇တယ်။
-အင်တာနက်သုံး၊ဖုန်းပြော ၊ တီဗီကြည့် တစ်နေ့ ကို ၄ နာ၇ီအချိန်ပေးခဲ့ ၇မယ်ဆို၇င် နောက်ထပ် ၁၀ နှစ်ကုန်သွားပြန်တယ်။
-တစ်နေ့ တာအစားအသောက်စားဖို့ အတွက် ၁ နာ၇ီ
-အထွေထွေကိစ္စတွေအတွက် ၃ နာ၇ီ အချိန်ပေးခဲ့ မယ်ဆို၇င် ၁၀ နှစ်
ဒါပဲလား...အချိန်အနှစ် (၆၀) !
၇ခဲ လှတဲ့ ဒီလူဘ၀မှာ ကိုယ်အတွက်ကော အများအတွက်ကောတစ်ခုခု ကောင်းအောင် ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အချိန်ထဲကနေ လုပ်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားသင့် တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Posted by World of Wingate Sai at 2:09 PM No comments:
သူတပါးကိုအစောတလျင်မဝေဖန်နဲ့မပုတ်ခတ်ပါနဲ့ ။
သူအ၇ိပ်ကြည့် ပြီးဆုံးဖြတ်၇င်တောင်ဖြစ်၇ပ်မှန်နဲ့ ဆန့် ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
"သိတဲ့ အ၇ာအားလုံးကိုပြောဖို့ အေ၇းမကြီးဘူး၊ ပြောတဲ့ အ၇ာအားလုံးကိုတော့ သိဖို့ အေ၇းကြီးပါတယ်"
Posted by World of Wingate Sai at 1:24 PM No comments:
Posted by World of Wingate Sai at 1:40 PM No comments:
တို့ မြန်မာလူငယ်များအတွက်သမ္မတကြီး၇ဲ့ ဆုံးမစကား
ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့၌ အောက်တိုဘာ ၈ ရက် ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီ ၁၀
မိနစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးတွင် သံအမတ်ကြီးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ ပညာသင်ကြားရန် ရောက်ရှိနေသော မြန်မာပညာသင်တန်းသားများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ပြောကြားခဲ့သော ဆုံးမ စကားများကို မှတ်မိသလောက် တင်ပြလိုက်ပါသည်။
““ သူများတိုင်းပြည်တွေမှာ တိုးတက်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတဲ့ အချိန်မှာ တို့နိုင်ငံမှာတော့ ထင်းစည်းလေးချိုးပြပြီး စည်းလုံးညီညွတ်ဖို့ သင်နေရတယ်။ တစ်ချောင်းထဲဆိုရင် ကျိုးတယ် သုံးချောင်းလောက်ဆိုရင် မကျိုးဘူး ဆိုပြီး။ ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် ကြိုးစားရတယ်။ အရင်က နှစ် ၂၀ လုံးအဖက်ဖက်က ပိတ်ဆို့တာတွေ မဆက်ဆံတာတွေ ဆန့်ကျင်တာတွေ ခံခဲ့ရတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီကို ၀န်းရံနေတဲ့ ပါတီတွေဆိုရင်လည်း အရင်က ကျောခိုင်းနေရာက အခုမျက်နှာချင်းဆိုင် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လ
ာအောင် ကြိုးစားခဲ့ပြီ။ ကိုရီးယားနိုင်ငံ မှာ ပညာသင်ကြားဖို့ ရောက်ရှိနေတဲ့ သမီးတို့ သားတို့လည်း နိုင်ငံခြားရောက်ရင် ပြီးရော ဆိုတဲ့စိတ် မမွေးပါနဲ့ သူများနိုင်ငံတွေမှာ ဘယ်လိုတွေ ကြိုးစားနေလည်း လေ့လာပါ။ အတုယူပါ။ ကိုရီးယားနိုင်ငံ တိုးတက်နေတာဟာ သူတို့လူမျိုးတွေက ၀ီရိယ ကောင်းတယ်။ ကျောက်တောင်တွေကို တူးဆွပြီး သီးနှံကို နိုင်ငံတော်အတွက် စိုက်ပျိုးတယ်။ တို့နိုင်ငံဟာ သယံဇာတ ဆိုရင်လည်း မထွက်တာ မရှိသလောက်ပဲ။ ရေမြေ ရာသီဥတုလည်း မဆိုးဘူး အဖက်ဖက်က ပြည့်စုံ နေပေမယ့် ဘာကြောင့်ဆင်းရဲနေသလဲ ဆိုတော့ brain လိုနေလို့။ ဒါကြောင့် နည်းပညာတွေ သင်ကြားကြပါ။ သင်ကြားတတ်မြောက်ပြီးရင်လည်း ကိုယ့်နိုင်ငံကို ပြန်လာပါ။ အခုလည်း ခရီးတွေ ဆက်နေတော့ ပင်ပန်းပါတယ်။ တစ်နေ့ကပဲ အမေရိကန်ကို သွားရတယ်။ ဟိုမှာလည်း ကိုယ့်နိုင်ငံ အတွက် စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းတွေအတွက် ဟီလာရီကလင်တန်ကို မျက်နှာချိုသွေးရတယ်။ သူတို့ကလည်း စီးပွားရေးနဲ့ လိုအပ်တဲ့ အကူညီတွေ ပေးနေပါပြီ။ အမေရိကန်ကို ချစ်လွန်းလို့ အားကိုးလွန်းလို့ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်နိုင်ငံက နောက်ကျကျန်နေလို့ ၁၀ လှမ်းနဲ့ မမီလို့ အပြေးလိုက်နေရပြီ။ နိုင်ငံခြားက မိတ်ဆွေတွေက မေးတယ် ခင်ဗျားတို့ နိုင်ငံမှာ အလုပ်လက်မဲ့တွေ ဘယ်လို ထမင်းစားလဲ ကျွန်တော် တို့နိုင်ငံမှာတော့ အလုပ်မရှိရင် ထမင်းစားဖို့ မရဘူး တဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အလုပ်လက်မဲ့တွေတော့ ရှိတယ် ဒါပေမဲ့ ထမင်းမငတ်ဘူး လို့ပြောတော့ အံ့သြသွားတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ စားစရာ မရှိရင် ဘယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းတက်စားစား ရတယ်။ အလှုရှင်တွေကလည်း နေ့တိုင်းရှိတယ်။ ဒါကြောင့် နည်းပညာလိုနေတဲ့ အတွက် စာကိုကြိးစားသင် ယူကြပါ။ နောင်ကျရင် နိုင်ငံတော်အနာဂတ်က မင်းတို့လူငယ်တွေ လက်ထဲ လွှဲခဲ့ရမှာပဲ။ တို့က အသက်ကြီးပြီ။””
အထက်ပါ သမ္မတကြီးပြောကြားသော ဆုံးမစကားများကို မနေ့ညက sky net Up To Date မှာ ကြည့်ရတာပါ။
Posted by World of Wingate Sai at 2:57 PM No comments:
မင်းသမိုင်းကောင်းလိမ့် မယ်လို့ ....
မမျှော်လင့် ပါနဲ့ ။
မင်းသမိုင်းကောင်းလိမ့် မယ်လို့ တော့ ...
မမျှော်လင့် ပါနဲ့ .....။
မိတ်ဖွဲ့ တတ်ဖို့ ပဲ....။
Posted by World of Wingate Sai at 1:26 PM No comments: